မည်သည့် Android Version ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်ထည့်ပေးမည့် Smart Zawgyi Pro - .::just for share::.
Home » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » မည်သည့် Android Version ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်ထည့်ပေးမည့် Smart Zawgyi Pro
မည်သည့် Android Version ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်ထည့်ပေးမည့် Smart Zawgyi Pro
မည်သည့် Android Version ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်ထည့်ပေးမည့် Smart Zawgyi Pro ထွက်ရှိလာပါတယ်။ Android 4.1,4.2 Jelly Bean တွေမှာ သဝေထိုးနဲ့ အသတ်တွေ ရှေ့နောက်လွဲနေတာတွေကို… 100% ပြင်ပေးနိုင်ပါမယ်… နောင်ထွက်မည့် Version တွင် ညာဘက်ထောင့်မှစာများ ပြတ်နေတာတွေကိုပါ ရှင်းပေးပါ့မယ်… Orient Myanmar လို Huawei တစ်မျိုးတည်းရတာမဟုတ်ပဲ… မည်သည့် ဖုန်းကိုမဆိုရပါမယ်… Sony, Huawei အားလုံးမှာစမ်းပြီးပါပြီခင်ဗျား… Samsung တွေဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို တရားဝင်သွင်းတဲ့ အလုံးတွေအားလုံး စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Smart Zawgyi Pro ကိုရေးသားဖန်တီးသူကတော့ Developer Ko Kyaw Swar Thwin ဖြစ်ပါတယ်။ Smart Zawgyi Pro for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Download - http://d-h.st/UFk
Credits - Myanmar Mobile Apps PC & Android Tips & Tricks အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++